Izilonda esiswini sokulahlekelwa isisindo
Ukufaneleka Yehlisa isisindo ngemithetho
I-Nicotinic acid akufanele idideke ne-nicotine epaketheni likagwayi. Yiqiniso, ukubhema kuyindlela eqinisekile yokwehlisa isisindo, kodwa manje sikhuluma ngomhlaba wenye i-nicotine-nicotinic acid, ukulungiselela i-vitamin okuthiwa i-PP noma i-B3.
I-Nicotinic acid ithinta ukuxubha kwamathambo, amaprotheni nama-carbohydrate, ukusheshisa umzimba , futhi kuthinteka kahle ukusebenza komzimba we-cardiovascular kanye nobuchopho.
Le vithamini ingasetshenziswa ngomlomo, ngendlela yamathebulethi, ungadonsa amandla nokudla okuvela ekudleni, futhi ungenza imijovo nge-nicotinic acid esiswini ukuze ulahlekelwe isisindo. Kuyindlela yokugcina futhi ucabangele.
Isibonakaliso somjovo we-nicotine
Imishanguzo esiswini esiswini sokulahlekelwa isisindo kanye nokuqukethwe kwe-nicotine kumele inqunywe udokotela, ngoba akusilo ukulahlekelwa isisindo ngehlobo noma emshadweni, kodwa mayelana nesilinganiso esinzima salesi sidakamizwa. Khumbula umthetho wegolide wabaphulukisi - inzuzo yomuthi kumele idlule ukulimala okubangela.
Izinkomba zamagciwane nge-PP:
izifo zesimiso senhliziyo;
izilonda zamapheshana emathunjini;
i-gastritis ene-asidi ephansi;
ukuphazamiseka kwezitsha zobuchopho, izitho;
i-neuritis ye-nerve facial;
Ngaphezu kwalokho, ukujova esiswini nge-PP kunqunywe futhi kube nokuphuza igazi kwezilonda ze-trophic kanye ne-varicose veins. Ngakho-ke, i-nicotinic acid ikhulisa ukugeleza kwegazi, ikhuthaza ukonakala kwayo futhi ivimbela ukwakheka kwezindwangu zegazi.
Ngokuqondene namajova nge-vitamin PP yokushisa amafutha esiswini nasemzimbeni wonke, asetshenziselwa ukukhuluphala, isifo sikashukela, isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, i-thrombi, nanoma yiziphi ezinye izifo lapho kutholakala khona izixuku ezinamafutha emngceleni obulalayo.
Umphumela wokulahlekelwa isisindo kusuka ku-nicotinic acid ukusheshisa zonke izinqubo ze-metabolic. Leli ithuluzi elihle kakhulu uma lisetshenziselwa ukulinganisa okuncane - kusuka emikhiqizweni yemvelo:
Slugs ukulahlekelwa isisindo
Kodwa hhayi kuphela ukuthi i-nicotinic acid isisiza ukunciphisa isisindo. Mayelana nanoma yikuphi ukujola esiswini esiswini sokulahlekelwa isisindo kuzokutshela noma yikuphi ukulahlekelwa isisindo intombazane, ngoba lokhu kubizwa ngokuthi i-mesotherapy.
Isimiso senqubo silula - inaliti ifakwe ku-1.5 mm ejulile, futhi izinto ezihlukahlukene ezisebenzayo zifaka ungqimba oluncane lwe-fat - L-carnitine , ama-extract artichoke, i-lecithin, i-pentoxifylline. Banokwazi ukushisa amafutha ngaphandle kokuthola ithuba lokusinda, ukukhipha i-cellulite, ukuqinisa isikhumba.
I-Phyto-tea yokulahlekelwa isisindo
Kuthela ngamanzi abandayo okwehla kwesisindo
I-Antilipid Tea "Izihlobo"
Isinxeba segolide esincane
Ukugoqa ekhaya ukunciphisa
Ukudla kokulahlekelwa isisindo ekhaya
Chicory for isisindo ukulahlekelwa
Indlela yokulahlekelwa isisindo emahlathini?
Itiye elincane "I-Flying Swallow"
Ingabe ikhofi eluhlaza kusiza ukuncipha?
I-lipoic acid yokuswela isisindo - ukuthatha kanjani, isilinganiso
Amafutha ashukela okwehla kwesisindo
Inombolo 4 ngokubala
I-parakeratosis yomlomo wesibeletho
UKim Kardashian noKhan West
Iphephadonga elisesitayela se-art deco
Ama-aerobic umzimba wokushisa amafutha
Uphawu: izihlathi zishisa
Amazinyo abukeka kanjani?
Wedding dress for umfowethu
I-Teenage Bike for Boys
U-Lupita Niongo ubike ukuhlukumeza ngokobulili uHarvey Weinstein kuye
I-Surdologist - ngubani, futhi yiziphi izici zomsebenzi kadokotela?
Ukuhamba nge-fashionable 2014
Izinadi ezenziwe ngemfashini 2016
I-Oak bark - isicelo
Ungakhetha kanjani i-backpack?
Ama-crusts amahalananda - okuhle nokubi
Uhlelo lukaDkt. Zhukov
I-plastic caisson ye-borehole
Izipikili zangaphambi kokuvuthwa 2015